पढ्दा–पढदै आँखा रसाउने प्रधानमन्त्री ओलीको गोलघर डायरी « Janata Times
पढ्दा–पढदै आँखा रसाउने प्रधानमन्त्री ओलीको गोलघर डायरी
०३० सालदेखि लगातार १४ वर्ष लामो यातनादायी काराबास जीवन बिताउनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गोलघरको कठोर जीवनबारे लेखेको स्मृति हो, यो । यसअघि झापा आन्दोलनका पाँच सहयोद्धालाई जेल सार्ने बहानामा सुखानीको जंगलमा लगेर हत्या गरिएको थियो । पोखरा जेलसारीको निहुँमा ओलीको पनि हत्या गर्ने प्रयास भएको थियो त्यसेबला । एउटा हवल्दारको कारण उहाँको ज्यान जोगियो ।
०३० असोज २३ गते रौतहटबाट पक्राउ गरी ओलीलाई वीरगन्ज जेलमा राखिएको थियो । वीरगन्जबाट काठमाडौंस्थित भद्रगोल जेल हुँदै केन्द्रीय कारागार ल्याइएको थियो । कैदीहरूलाई यातनापूर्वक राखिने केन्द्रीय कारागारको गोलघरमा व्यतीत आफ्नो जीवनबारे ओलीले ०४६ सालको परिवर्तनपछि संस्मरण लेख्नुभएको थियो । ‘युगदूत’ पत्रिकाको संस्मरण अंकका लागि लेखेर पनि हराएका प्रधानमन्त्री ओलीका संस्मरणात्मक रचनाको डायरी पछि फेला परेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको आज ७० औं जन्मदिनको अवसरमा जनताटाइम्सले आज उहाँको तिनै गोलघर डायरीलाई पाठकसामू प्रस्तुत गरेको छ ।
ती दिन ज्यादै कठिन थिए । विसं २०३० मंसिर ११ गते मोहनचन्द्र अधिकारी र मलाई जेलको पनि महाजेल गोलघरमा हालियौँ । गोलघर काठमाडौं केन्द्रीय कारागारको बीचमा छ । त्यहाँ नौवटा स–साना कोठा र एउटा फलामको पिँजरा छ । अरू बन्दीबाट अलग्याएर एकान्तबासको सजाय दिइने ठाउँ भएकाले प्रत्येक कोठामा एक जनालाई मात्र त्यहाँ थुनिन्छ ।
फलामका ठुल्ठूला चारपाटे डन्डीले घेरिएको, भुईं र छानो बाक्ला फलामका पाताहरू भएको त्यस पिँजराको आकार नै यति सानो हुन्छ कि एक जनाभन्दा बढी थुन्न सकिने हुँदैन । चौडाइ डेढ फिटजति, उचाइ र लम्बाइ साढे तीन फिटजति भएको त्यस पिँजरामा थुनिनेले कहिल्यै पनि उभिन र खुट्टा पसार्न पाउँदैनन । हामीलाई गोलघरमा हालिँदा पूर्णबहादुर कुमाल पिँजरामा रहेछन ।
उनी ज्यान मुद्दामा परेका र पागल भएर जेलमै दुईजना बन्दीहरूको हत्या गरेर पिँजरामा थुनिएका रहेछन । जेलको नियम र प्रचलनअनुसार जेलभित्र कसैले ज्यान मारेमा उसलाई गोलघरमा थुनेर सजाय दिइन्छ र गोलघरमा बसेर कसैको ज्यान मारे उसलाई पिँजराबासको सजाय दिइन्छ । जेलमा कुनै बन्दी पागल भयो भने उसलाई पनि अरू बन्दीहरूको सुरक्षार्थ गोलघरमा थुनिन्छ ।
गोलघरमा पस्नेबित्तिकै म आश्चर्यचकित भएँ । त्यस्ता ठाउँमा र त्यसरी पनि मान्छे थुनिन्छन भन्ने मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ । सानो गोलघरको कुनामा खुला पाइखाना ! ढोकाबाट पस्नेबित्तिकै दुर्गन्धले बान्ता आउन खोज्यो । तर, अनिश्चित लामो कालसम्मका लागि त्यहीँ बस्नु थियो । म त्यहीँ छिराइएँ । पिँजरा र अरू कोठामा थुनिएका आठजना पागलहरूले म त्यहाँ लगिँदा आ–आफ्नो पाराले मेरो स्वागत गरे– कसैले अश्लील गाली गरेर, कसैले आफूले गरेको दिसाको झट्टी हानेर ।
ढोकाछेवैको कोठाका मीनराज पाण्डे भन्ने रहेछन । उनी विनामुद्दा, पागल भएकाले परिवारको आग्रहमा सुरक्षार्थ त्यहाँ थुनिएका थिए । उनले भने मलाई छुट्टै पाराले स्वागत गरे । एकतमासको जोसमा उनी ठूलो स्वर निकालेर कराए, ‘जोन्सन्स वार केनेडिज वार, कर्णाली आन्द्रेई ग्रोमिक हो । थ्यांक्स भुट्टो, यू ह्याभ एलाउड थाई एयरलाइन्स टु कम टु अस भाया ढाका ।
कामदारी खुट्टो समात, पानी तता, यो एकमुठो घाँस हाल्दे ।’ उनले आफ्ना छेवैमा राखेको रायोको सागको मुठा उठाउँदै भने, ‘मार चैँ मै हान्छु, बोकालाई यहाँ मार्न ल्याएको त हो नि !’ यति भन्दै उनी जोडले खित्खिताएर हाँसे । उनको त्यो व्यवहार देखेर मलाई भान पर्यो–पागलहरू आफ्नै सुरमा अन्तस्करण ओकल्छन । जेल सार्ने वा गोलघरमा लैजाने निहुँ बनाएर कैदीलाई मार्ने काम भइरहेका थिए, त्यही ओकल्यो ।
भित्ताभरि दिसा पोतिएको, भुइँभरि पनि दिसा छरिएको एउटा कोठा देखाएर मलाई त्यहाँ पस्न भनियो । कोठाको एउटा कुनामा खाल्टो रहेछ । त्यहीँ चर्पी रहेछ । त्यसबाट फोहोर निकालेर भुइँभरि छरिएको रहेछ । मैले, ‘के म यसै कोठामा बस्ने ?’ भनेर सोधेँ । मलाई त्यहाँ पुर्याउने कामदारले अल्छी पारामा भने– हो ।’ मैले कम्तीमा त्यस कोठामा बस्न अस्वीकार गर्दै भनेँ, ‘म यस कोठामा चैँ पस्दिनँ र बस्दिनँ पनि । मान्छे थुन्ने ठाउँ कहीँ यस्तो हुन्छ ?’ उनीहरूले मलाई त्यही कोठामा बस्न कर गरे । तर, हात हालेर बलजफ्ती भने गरेनन ।
उसले बडो ठाँटले भन्यो, ‘के हो, के भयो ?’ उसको बोलीको भाँती जानकारी लिन खोजेको जस्तो थियो । उसलाई कामदारले वृत्तान्त सुनाए । उसले अलिक निर्णयात्मक स्वरमा भन्यो, ‘हेर्नोस, तपाईंलाई गोलघर राख्नु भन्ने आदेश छ, हामी त्यत्ति जान्दछौँ । गोलघर यही हो । अनि तपाईं यहाँ नबसेर कहाँ बस्नुहुन्छ ?’ मैले जवाफ दिएँ, ‘मान्छे थुन्ने ठाउँ पनि यस्तो ! यस कोठामा म बस्दिनँ ।’
त्यो एउटा छुट्टै संसार थियो । पागलहरू आफ्नै तरंगमा डुबेका हुन्थे । कोही हाँस्थे, कोही रुन्थे । कोही भुत्भुताउँथे भने कोही चर्को आवाजमा कराउँथे, चिच्याउँथे । कहिले कोही रुँदा–रुँदै हाँस्थे भने कहिले हाँस्दा–हाँस्दै, रुन्थे । मोहनचन्द्र र मेरो लागि ठाउँ खाली गर्न दश जनामध्ये दुई जनालाई बाहिर जेलमा निकाले ।
बाँकी रहेका आठ जना पागलमध्ये ज्ञानेश्वरका मीनराज पाण्डे, काभ्रेका केदार उप्रेती र ज्यानमुद्दामा धेरै वर्ष सजाय भोगिसकेका भोजपुरका वीरबहादुर कुमालको पागलपन अलिक बेग्लै प्रकारको थियो । उनीहरू फोहोर खेलाउनेसम्मको स्थितिमा भने थिएनन । हाम्रा लागि कोठा ठीक गर्न बाहिर निकालिएका पागलहरूको स्थिति पनि ती तीनजनाको जस्तै–जस्तै रहेछ । तर, हामीलाई थप दुःख दिनका लागि पनि उनीहरू बसेका कोठाहरू नदिएर अवस्था ज्यादै बिग्रेका पागलहरूलाई ती कोठामा सारी हाम्रा निम्ति फोहोर कोठाहरू तयार पारिएका रहेछन ।
शान्त बस्तीमा भुइँचालो आएजसरी एकचोटि जेलको वातावरण जर्याकजुरुक भयो । उनीहरू आ–आफ्नै पारामा केही कराए, तर पहिलेको भन्दा कम । मीनराज पाण्डे भने उत्तिकै उत्साहसाथ उत्तिकै उँचा स्वरले कराए । उनी वेला–वेला बतुराउँदा उही कुरा दोहोर्याउँथे, ‘जोन्सोन्स वार, केनेडिज वार…।’ पागलहरूको कोलाहल र मीनराज पाण्डेको ‘बोकालाई यहाँ काट्न ल्याएको’ जस्ता कुराले मोहनचन्द्रलाई मनोवैज्ञानिक असर पार्यो । उहाँले मलाई देख्नुभएको थिएन ।
उहाँले गोलघरका कोठातर्फ हेर्न भ्याउनु नै भएको थिएन । मैले उहाँलाई बोलाएँ र पागलहरूका कुरातर्फ ध्यान नदिन भनेँ । उहाँलाई गोलघरको प्रवेशद्वारबाट पस्नेबित्तिकै दाहिनेतर्फको अर्थात पूर्व लाइनको सबभन्दा दक्षिण कुनाको कोठामा थुनेर उनीहरू बाहिरिए । पश्चिम लाइनको सबभन्दा दक्षिणमा सार्वजनिक खुला चर्पी थियो र त्यो मोहनचन्द्रलाई थुनेको कोठाको सामुन्नेमा पथ्र्याे ।
अपराह्नतिर हामी दुवैजनाको ढोका खोल्न कामदार आए र हामीलाई कोठाबाट निकालेर गोलघरको प्रवेशद्वारको भित्री ढोकासम्म ल्याए । बाहिरी ढोकाबाट बाहिरपट्टि त्यसवेला त्यसै जेलमा थुनामा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई, बोधराज उपाध्याय (जनकपुर) लगायतका केही मित्र भेट्न आउनुभएको रहेछ । दुई–तीन मिनेट टाढैबाट उहाँहरूसँग देखादेख भयो ।
उहाँहरूले सहानुभूति प्रकट गर्नुभयो र केही अप्ठ्यारो परे आफूहरूलाई खबर पठाउन आग्रह गर्नुभयो । केहीबेरपछि कामदारले हामीलाई बाबुकाजी वासुकलाजीहरूको मेसबाट खाना आउने जानकारी गराए । वासुकलाजी भक्तपुरको हुनुहुन्थ्यो । त्यसको केहीबेरपछि नै हाम्रा ढोका फेरि खोलिए । उही पाराले ओल्लो ढोका वारि र पल्लो ढोका पारि भएर हामीले गंगालाल श्रेष्ठ (लाल कम्युनिस्ट) काठमाडौं, बाबुकाजी वासुकला भक्तपुर र अरू दुई–तीनजना साथीहरूसँग देखभेट गर्यौँ । उहाँहरूले हाम्रा लागि खानाको व्यवस्था आफूहरूले गर्ने र अन्य आवश्यक सहयोग पनि सकेसम्म पुर्याउने बताउनुभयो । यस्तो देखभेट तुरुन्तै, दुई–चार मिनेटमै सिद्धियो ।
कामदारले ‘सुकुल दिन हुने भए सरकारले दिन्थ्यो, यस्ता मान्छेलाई सुकुल दिएर झमेला नउठाऊ’ भनेर बन्दीहरूलाई तर्साए । तैपनि ‘कपडा पनि छैन, खाली भुइँमा कसरी रात काट्ने ? जेसुकै होस म त यो एउटा सुकुल दिन्छु’ भनेर एकजना बन्दीले मलाई एउटा सुकुल दिए । म को हुँ, कहाँबाट, किन, के मुद्दामा यसरी लुगाफाटोविना ल्याइएँ र दुईजना कामदारको कडा निगरानीमा कसैसँग बोलचाल गर्न नदिने गरी खटाइए भन्नेजस्ता जिज्ञासा बन्दीमा रहेको उनीहरूका आपसी कुराबाट बुझिन्थ्यो ।
हामीलाई पनि त्यस्तै भयो । उहाँहरूले मीठो–मसिनो र स्वादिष्ट भोजन पठाउनुभयो, तर हामीलाई भने त्यसवेला मीठोको भन्दा मात्राको मतलब थियो । खाना आधा पेट भयो कि चौथाइ पेट भयो भन्न सकिँदैनथ्यो । तर, त्यहाँको वातावरण, दुर्गन्ध, एकान्तबास आदिले हाम्रो क्षुधालाई केही नियन्त्रण पनि गर्यो । तर, अब जिन्दगी त्यहीँ र त्यसरी नै बिताउनुपर्ने बोधले हामीलाई जीवन त्यति कठिन र बोझिलो लागेन । जे होस नयाँ अनुभवको सुरुवातसाथ त्यो दिन बित्यो ।
हुन त त्यहाँका मुसाले दुःख मात्रै दिएनन, थुनिएकाहरूलाई मनोरञ्जन पनि दिए । त्यहाँ प्रायः मुसाको पूर्वलाइनको गिरोह र पश्चिम लाइनको गिरोहबीच ठूलो ग्याङ फाइट चल्थ्यो । लडाइँको कारण त थाहा पाउन सकिएन, तर उनीहरूको भिडन्त भने डरलाग्दो थियो । गोलघरका मुसा सप्रिएका, लामा र ठूला खालका छन । संख्या सयौँको छ । आपसमा टोकाइ र च्याँ–च्याँ चूँ–चूँको ठूलो हल्लाखल्ला साथ लडाइँ सुरु हुन्छ । साना (छाउराहरू) लडाइँमा देखा पर्दैनन । अलिक ठूलाहरू गिरोहमा सामेल भएर, भाग्न अनुकूल ठाउँमा बसेर, कहिलेकाहीँ दौडेर अर्कोपट्टिकालाई टोकेर वा तर्साएर फर्किन्छन । छाउरा मुसाको बथानले हल्ला र दौडधुपबाट लडाइँलाई ऊर्जायुक्त बनाउँथे भने छिप्पिएकाहरू र खासगरी जवान लडाकुहरू अघि बढेर एकापसमा लड्थे । उनीहरूबीच टोकाटोक हुन्छ ।
मानिसले कुस्ती खेलेझैँ उभिएर पनि लडाइँ गर्छन र कहिलेकाहीँ उभिएर अर्को पक्षको स्थितिको निगरानी पनि गर्छन । कहिलेकाहीँ लडाइँमा जवानहरू भिडिरहेका वेला एकातर्फबाट धुरिएर जाइलाग्दा अर्कोतर्फमा भागाभाग मच्चिन्छ । त्यस्तो वेलामा दोहोरो कोकोहोलो मच्चिएको हुन्छ । लडाइँ घन्टौँ चल्छ र अन्त्यमा एउटा बलियो मुसाले अर्कोलाई समातेर मारेपछि सब थर्कमान हुन्छन । त्यसपछि युद्ध अन्त्य हुन्छ । विजयी मुसाले अर्काेको मुटु कलेजो खान्छ र २–४ दिनलाई मुसायुद्ध समाप्त हुन्छ ।
तर, पछिपछि चुरोटका खोल अलिक प्राप्त गर्न सक्ने भएपछि भने गद्य कविता र अलिक लामा कविता पनि लेख्न थालेँ । म जेल नपर्दा पनि कविता लेख्थेँ । तर, जेलको लेखाइ अनेक हिसाबले विशेष महत्वको भयो । गोलघरमा भिन्न प्रकारका भोगाइ र अनुभूति थिए । श्रोता थिएनन र भएका पनि कमै बुझ्ने स्तरका थिए । समय व्यतीत गर्न पनि सजिलो थिएन । लेख्ने कलम–कागजको प्राप्ति अनौठो थियो । यी सब कारणले त्यसवेलाको लेखन मेरा लागि अनौठो र महत्वपूर्ण अनुभूति थियो ।
पागलहरू अनेक तरंगका संसारमा हुन्छन् । पागल भएकाले उनीहरू मौका मिले खतरनाक पनि हुन सक्छन । मौका नमिले नराम्ररी मानसिक यातनाको सिलसिला पनि सुरु गर्न सक्छन । सद्देलाई पनि कहिलेकाहीँ लाग्छ, ‘म सद्दे नै त छु ?’ मोहनचन्द्रले यो सिलसिला थाम्न सक्नुभएन ।
केदारका र केदारजस्तैका कुराहरूले उहाँलाई पनि तरंगित गरायो । गोलघर परेको केही दिनभित्रै म झन गम्भीर र त्रासदीपूर्ण स्थितिमा पुगेँ । ‘म पनि सद्दे नै रहन त सकुँला ?’ एउटा प्रश्न । ‘साथीलाई बर्बाद हुनबाट कसरी जोगाउने ?’ अर्को समस्या । जे होस, यी प्रश्नहरू ओहोरदोहोर गर्थे मनमा ।
त्यसवेला मैले एउटा कापी र डटपेन भने प्राप्त गरें, सुटुक्क । ‘अखबार’ भन्ने एउटा गद्य कविता लेखेँ । त्यो कविता कसरी–कसरी पछिसम्मै सुरक्षित रहन सक्यो । मौका मिल्दा मैले थुपै्र कविता, कथा र निबन्ध बाहिर पठाएँ । त्यो कविता पनि त्यसमध्येकै थियो । पछि पार्टीले साहित्यिक पत्रिका ‘युगदूत’ प्रकाशन गर्दा मेरो त्यो कवितासहित केही कविता र अर्को अंकमा एउटा कथा पनि छापिएछ ।
गोलघरका कठिन दिनमा लेखेका कविता घरिघरि झल्याकझुलुक स्मृतिमा आइरहन्छन । मेरा कविता उम्दा थिए कि थिएनन, म यसै भन्न सक्दिनँ । तर, कमजोर भने थिएनन । गोलघरमा बिताएका दिन सम्झिँदा म त्यसवेला पाएको यातना मात्र सम्झन्नँ, त्यहाँ लेखिएका मेरा प्रिय कविता पनि सम्झन्छु ।